आइसिटी लेख Archives - Page 12 of 13 - Living with ICT
Home / आइसिटी लेख (page 12)
आइटी करियरमा लाग्ने कता ?
मदन कडरिया | मानिसहरुलाई आफ्नो जीबन सुखमय तरीकाले बितोस भन्नको लागी सन्तुस्टी हुन अति जरुरी हुन्छ । सन्तुस्टी प्राप्त गर्नको लागी आफुले सोचे जस्तो जिन्दगीको समय यात्रा बित्नु पर्छ । यसरी जीबन बिताउन र जीबनमा केही गर्नको लागी आफ्नो प्रोफेसनमा सन्तुस्टी पाउनु जरुरी हुन्छ । बाहुल्यतामा मानिसहरूले आफुलाइ मन परेको र इच्छा लागेको बिधा नै छानेर अगी बडेका …
– एस.वी गौतम । मार्क जुकरवर्ग फेसवुक सस्थापक हुन् । उनी एक मध्यम परिवारमा अमेरिकाको न्युयोर्कमा सन् १९८४ मे १४ मा जन्मिएका हुन् । हार्डवर्ड विश्वविद्यालयमा पढ्दै गर्दा उनले सन् २००४ मा फेसवुकको स्थापना गरेका हुन् । कलेजवाट सुरु भएको फेसवुक अहिल्य विश्वमा फैलिएको छ । जुकरवर्ग छोटो समयमा धनाढ्य हुने विश्वमै सवैभन्दा कान्छा अर्वपतीमा पनी पर्दछन् । …
– फेसबुक, सामाजिक सञ्जालको पयार्यबाची नै भएको छ । अक्टोवर ४ मा फेसबुकले आफ्ना सदस्यहरुको संख्या १ अर्व नाघेको घोषणा गरको छ । छोटो समयमा धेरै नै अगाडी बढेको सामाजिक सञ्जालमा फेसबुक पहिलो नम्बरमा परेको छ । नेपाल टेलिकमले भख्खरै प्रकाशित गरेको तथ्यांकको आधारमा हेर्ने हो भने १९ प्रतिशत नेपालीहरु इन्टरनेटको पहुँचमा पुगेका छन् । त्यसले गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालहरुमा …
केन सुवेदी | अल्ट्राबुक्स इन्टेलको स्थापत्य हो । उसको परिभाषामा अल्ट्राबुक्स भनेको उच्चस्तरीय सबनोटबुक हो, जुन २ दशमलव १ सिएमभन्दा कम र तौलमा १ दशमलव ५ भन्दा कम हुन्छ । तर, कार्यक्षमता र ब्याट्रीले भने सम्झौता गर्दैनन् । अल्ट्राबुक्सले लो पावरका इन्टेल प्रोससरहरू प्रयोग गर्छ । जोडिएको ग्राफिक्ससँगै र युनिबडी क्यासिसको प्रयोग गर्छ, त्यस्तै ठूला ब्याट्रीहरू साना केसमा अटाउँछ …
सूचना प्रविधिले बैंकिङ क्षेत्रमा पारेको प्रभाव
Oct 10, 2012	Comments Off on सूचना प्रविधिले बैंकिङ क्षेत्रमा पारेको प्रभाव
-नारायणहरि पाण्डे | एक्काइसौ“ शताब्दीको उत्तरार्धमा आउदा नेपालमा सूचना–प्रविधिको उल्लेखनीय विकास भएको पाइन्छ । विशेषगरी नेपालमा सूचना प्रविधिको विकास सरकारी निकायमा भन्दा निजी क्षेत्रमा विशेष उपलब्धि भएको छ । त्यसको बाबजुद पनि बैंकिङ क्षेत्रमा अझ बढी प्रभाव पारेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा सूचना प्रविधिले कार्य कुशलता, कार्यशैली तथा बैंकिङ पहु“चलाई अझ बढी महŒवपूर्ण बन्दै गएको छ । हाल …
खुल्ला सफ्टवेयर र सफ्टवेयर फ्रिडम डे !
तपाई कस्ता सफ्टवेयरहरु प्रयोग गरिरहनुभएको छ ? नेपालमा सक्कली सफ्टवेयर प्रयोग गर्नेहरु कति होलान ? यसको यकिन तथ्याङ्ग त छैन तर् ९५ प्रतिशत भन्दा बढि नेपाली कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरु ‘पाइरेटेड’ सफ्टवेयर नै प्रयोग गर्छन । केह ठुला बैंक, अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी सस्थाहरु बाहेक अरुका कम्प्युटरमा सक्कली सफ्टवेर भेट्न गाह्रो हुन्छ । विश्व बजारमा माइक्रोसफ्टको सफ्टवेयरले झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ …
ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, सम्भावना र अवसरहरू
Aug 17, 2012	1
~ई. मुकेश रेग्मी ~ सूचना प्रविधिको उपादेयता तथा लाभलाई नेपालका ग्रामीण दूरदराजका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनमानससमक्ष पु¥याउन सर्वप्रथम मूलभूत रूपमा यसका लागि अति आवश्यक पूर्वाधार इन्टरनेट सेवाको पहुच र विस्तार तततत् क्षेत्रमा हुनु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ । इन्टरनेट सेवाको पहु“च र विस्तार ग्रामीण क्षेत्रमा नहुदासम्म विद्युतीय शासन (E-Governance) केवल शब्द, सिद्घान्त र बहसमा मात्र सीमित हुन जान्छ । आज …
सोसियल मिडिया “फाइदा र बेफाइदा”
– एक्काइसौ“ शताब्दीले सूचना प्रविधिलाई विकासित बनाएको छभन्दा दुईमत हु“दैन । सूचना प्रविधिको विकासस“गै इन्टरनेट, इमेल र वल्र्डवाइड वेबको व्यापकता बढेको छ । १८ प्रतिशत नेपालीहरू इन्टरनेट चलाइरहेका छन्, जुन कुरा अरू देशको तुलनामा कमै भए पनि नेपालका लागि दु्रत गतिमा बढ्दै गरेको प्रतिशत हो । इन्टरनेटमा पनि धेरै खोलिने साइटहरूमा सामाजिक सञ्जाल अर्थात् सोसियल नेटवर्किङ रहेको छ । कतिका …
अनलाइन ब्लगिङ्गबाट कसरी पैसा कमाउने ?
Aug 16, 2012	3
-धेरै पैसा कमाउने रहर कसलाई हुँदैन? व्यक्तिगत एवम पारिवारीक खर्च धान्न, सामाजिक गतिविधी एवम् हितका लागि जानकारी राख्नु व्यवस्थित तुल्याउनु हरेक व्यक्तिका कर्तव्य र उत्तरदायित्वहरु हुन्, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो तर यसो भन्दैमा सबैले यी क्षेत्रमा दक्षता हासील गरेका हुन्छन् अनि त्यसमा सफल हुन्छन् भन्न सकिन्न । तर तिनलाई टार्ने या सहयोग पु¥याउने सही माध्यम पत्ता लगाउन सके …
फिनल्याण्डको सूचना प्रबिधि अनि हामी
~मदन कडरिया~ उत्तरी यूरोपमा रहेको सानो देश फिनलैंडको बिकासको इतिहास खासै लामो नभए पनि आज बिश्वको बिकसित मुलुकहरु मध्ये एकमा चिनिन्छ । फिनल्याण्ड बिकासमा सूचना प्रविधिले ठुलो हात खेलेको छ । बिश्व बिख्यात मोबाइल फोन ’नोकिया’ उत्पादन गरेर बिश्व सूचना संचार छेत्रमा नयाँ आयाम ल्याउने काम फिनलैंडबाट नै भएको हो , जसले गर्दा फिनलैंडलाई ’नोकियाको देश’ भनेर चिनिन्छ । …